Iilayibrari zabantwana ezi-3 ezifanelekileyo zilungele abantwana bakho kunye nabafundi | Uncwadi lwangoku
Iilayibrari zabantwana ezi-3 zilungele abantwana bakho kunye nabafundi
UCarmen Guillen | | iintlobo, Iincwadi, Iincwadi zoLutsha, Ezahlukeneyo
Abancinci banethamsanqa kunye nezixa zoncedo esinazo namhlanje ngenxa yeli hlabathi limangalisayo le-Intanethi. Namhlanje sikwazisa Iilayibrari zabantwana ezi-3 zilungele abantwana bakho kunye nabafundi oko kuya kukunceda kungekuphela bathathe inxaxheba ekufundeni abantwana kodwa nokuba ngabo bayifumana kumntu wokuqala enkosi ngokusebenzisana kwayo ngokulula.
Umxholo wayo wahlulwe ikakhulu kubudala bemveku kwaye wakube ulwazi olu lwazi unayo uluhlu olubanzi lomxholo wokukhuphela kunye nokonwabela 'kwi-intanethi ' ezinjengeevidiyo zemultimedia, amabali, imidlalo, imisebenzi, iingcebiso kunye nenyaniso yolonwabo kwizihloko ezithile.
Ukuba ufuna ukwazi ukuba zeziphi ezi layibrari zingama-5 zezinto sikunika zona kwi-Actualidad Literatura, qhubeka ufunda.
1 ILayibrari yoNcwadi lwaBantwana noLutsha
3 ILayibrari yeHlabathi yeDijithali yabantwana
ILayibrari yoNcwadi lwaBantwana noLutsha
La IMiguel de Cervantes iThala leeNcwadi elililo inikeza icandelo elibanzi elifumanekayo kubantwana. Ikhathalogu yayo ikakhulu yababhali baseSpain nabaseSpain baseMelika apho badibana khona usebenzela abantwana nabantu abancinci, iimagazini, amabali, ababhali bamathala eencwadi, iindibano zocweyo kunye nee-audios ngamabali abantwana. Indawo egqibeleleyo apho abantwana bakho banokonwabela ukufunda.
Ikhonkco lakho apha.
Njengoko bebonisa kwiphepha labo yi Indawo yokuqala yoLonwabo kunye neMfundo yaBantwana aBasaqalayo ukusukela nge1996. Yiziko lewebhu elinolwazi kunye neetekisi zokufunda ezigcweleyo.
Abo bajongene nokufumana olu lwazi kwabancinci ziimpuku ezincinci ezikhokela umntwana kwiwebhu.
ILayibrari yeHlabathi yeDijithali yabantwana
Eli thala leencwadi lahlulelwe abantwana ngu udidi lobudala:
Ukususela kwi-3 ukuya kwi-5 yeminyaka ubudala.
Ukususela kwi-6 ukuya kwi-9 yeminyaka ubudala.
Ukususela kwi-10 ukuya kwi-13 yeminyaka ubudala.
Ukufundwa esinokukufumana ngaphakathi nathi zohlulwe ngu «Iincwadi zeentsomi» okanye «Iincwadi zenyani». Kwakhona "ngeencwadi ezimfutshane", "iincwadi eziphakathi" okanye "iincwadi ezinde"; "ngeencwadi zemifanekiso" okanye "ngeencwadi zesahluko."
Enye indlela yoqobo kwaye inomtsalane emehlweni omntwana kukuba banokukhetha umbala weqweqwe labo: bomvu, luhlaza, tyheli, orenji, luhlaza okanye umnyama.
Banokukhetha iincwadi zabo kuxhomekeke ekubeni bafuna ukubona abalinganiswa bezilwanyana bokwenyani, abalinganiswa babantwana, okanye abalinganiswa bezidalwa abazicingelayo.
Elona khonkco liphambili leli thala leencwadi li enye. Kwaye ikhonkco kukhangelo olulula ebesithethe ngalo ngaphambili enye enye.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » Iincwadi zoLutsha » Iilayibrari zabantwana ezi-3 zilungele abantwana bakho kunye nabafundi
UJK Rowling uqhubeke nokwaliwa ngabapapashi emva kwempumelelo kaHarry Potter
Imizobo eyi-8 kunye nemifanekiso ekhuthazwe yimisebenzi emikhulu yoncwadi